အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ သံသယဖြစ်ဖွယ် မေးခွန်း နှင့် အဖြေ
မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) နှင့် အာလေ့ မိုဟမ္မဒ် (အ.စ) ထံ ဒိုအာ တောင်းခံခြင်း သည် ရှေးရ်က် ဖြစ်ပါသလား ?
ဇနျနဝါရီ ၂၄, ၂၀၂၂ - ၁၀:၄၉ ညနေ
မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) နှင့် အာလေ့ မိုဟမ္မဒ် (အ.စ) ထံ ဒိုအာ တောင်းခံခြင်း သည် ရှေးရ်က် ဖြစ်ပါသလား ? ဆိုသည့် မေးခွန်းအား အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် ဂျအ်ဖရ် စိုဗ်ဟာနီ ထံ မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာယာသွလ္လာဟ် ကြီးမှလည်း အောက်ပါအတိုင်း အဖြေ ပေး မိန့် တော်မူထားပါတယ်။
ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးသည် ရှိက်ခ်ခိုင်း ( အဘူဗကဲရ် နှင့်အိုမရ် ) တို့ အပေါ် ကျေနပ်ခဲ့ ပါ သလား?
ဖဖေျောဝါရီ ၄, ၂၀၁၉ - ၈:၃၁ ညနေ
ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးသည် ရှိက်ခ်ခိုင်း ( အဘူဗကဲရ် နှင့်အိုမရ် ) တို့ အပေါ် ကျေနပ်ခဲ့ ပါ သလား? ဆိုထားလေးကို အထောက်အထား အကိုးအကားများဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် ။
မိုသာ(ခ) ယာယီ နေကာဟ် အကြောင်း လေ့လာကြ ပါစို့ … ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်လေး အတွက် အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သိစေရန် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) ကျမ်း မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၈:၁၄ ညနေ
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၇ - ၈:၀၅ ညနေ
မိုစာဖ်ဖေ ဖွာတေမာ (စ.အ) ရှီအာ အေမာမ်မီယာ တို့၏ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် လော ?
ဇနျနဝါရီ ၈, ၂၀၁၇ - ၁၀:၂၆ ညနေ
မိုစာဖ်ဖေ ဖွာတေမာ (စ.အ) ရှီအာ အေမာမ်မီယာ တို့၏ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် လော ?ဆိုတာလေးကို အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာကြပါမည်။
ဒီဇငျဘာ ၃, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၂ ညနေ
ဝါဂျစ်ဗ်အမျိုးအစားများ နှင့် ဟရာမ်အမျိုးအစားများ ကိုအောက်ပါအတိုင်းလေ့လာ နိုင်ပါ တယ်။
အက်စ်မာ ဗင်သေ အိုမိုက်စ် သခင်မ နှင့် ဟဇရသ် အဗူဘကဲရ် ဆွဒီးက် ၏နေကာ ???
နိုဝငျဘာ ၁၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၄၇ ညနေ
ရှီအာ မွတ်စ်လင်မ် များ သို့ စေပါယေဆွာဟာဗာ (စွန်နီ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် ) အဖွဲ့ မှ မေးသည့် မေးခွန်း ပေါင်း ၄၄ ခု မှ အထက်ပါ ခေါင်းစဉ်သည် လည်း မေးခွန်း တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။
ရှေ့ဆောင်အေမာမ် အလျင် ရကူအ် နှင့် စဂ်ျဒဟ်ပြု ခြင်း ကိစ္စ
ဩဂုတျ ၂၈, ၂၀၁၆ - ၉:၅၅ ညနေ
မေးခွန်း ။ ။ ရှေ့ဆောင်အေမာမ် အလျင် ရကူအ် နှင့် စဂ်ျဒဟ်ပြု ခြင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှရီအီ ဥပဒေများကို သိလိုပါတယ်?
မြင့်မြတ်သည့် နာမံတော်များ ပါသည့် သတင်းစာများ နှင့် ၊ မဂ္ဂဇင်းများ ဆိုင်ရာ ကိစ္စ
ဩဂုတျ ၂၈, ၂၀၁၆ - ၉:၄၇ ညနေ
မေးခွန်း ။ ။ မြင်မြတ်သည် နာမံတော် များ ဥပမာ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်၏ အမည် (သို့) (ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ အမည် ) ၊ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏အမည်များ ပါသည့် သတင်းစာများ ၊ မဂ္ဂဇင်းများ ကို လူထု အနေဖြင့် ပစ္စည်း ထုတ်ရတွင်၎င်း မှန်ကို ကြည်အောင်တိုက်ရတွင် ၎င်း စသည်ဖြင့် အသုံးပြု ကြပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ သုံးခြင်းသည် ပြဿနာ ရှိပါသလား ?
မိန်းမစီးဖိနပ်နှင့်ယောက်ကျားစီး ဖိနပ် ကိစ္စ
ဩဂုတျ ၂၇, ၂၀၁၆ - ၁၂:၁၉ ညနေ
မေးခွန်း ။ ။ မိန်းမစီးဖိနပ် ကိုယောက်ကျားစီးမည် ၊ယောက်ကျားစီးဖိနပ်ကို မိန်းမစီးမည် ပြဿနာ ရှိပါသလား?
အလ္လာဟ်အမည် ပါသည့် လည်ဆွဲကိစ္စ
ဩဂုတျ ၂၆, ၂၀၁၆ - ၉:၅၇ ညနေ
မေးခွန်း ။ ။ အလ္လာဟ်အမည်ကို ထင်ရှားစွာ ရေးဆွဲထားသည့် လည်ဆွဲ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရှီအီ ဥပဒေများကို သိလိုပါတယ်။
ဝဇူ နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း ၆ ခု
ဩဂုတျ ၂၆, ၂၀၁၆ - ၈:၀၂ ညနေ
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များ အတွက် ဝဇူ နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း ၆ ခု ကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဝဇူနှင့်ပတ်သက်သည့် အမေးအဖြေ အချို့ 
ဇူလိုငျ ၁၉, ၂၀၁၆ - ၈:၄၇ နံနကျ
ဝဇူနှင့်ပတ်သက်သည့် အမေးအဖြေ အချို့  ကို အဗ်နာ ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ဘာသာပြန် ဖော်ပြ အပ် ပါတယ်။